हार नहोस् तिहार !
हामी तिहार मनाइरहेका छौं । तिहार मूलतः लक्ष्मीमाताको पर्व हो । उनको आराधनाको पर्व हो । सुख, समृद्धिको पर्व हो । गरीबी हटाउने, धन याने लक्ष्मी भित्र्याउने कामनाको पर्व हो । भनिन्छ, लक्ष्मीपूजाको रात लक्ष्मीमाता घरघरमा आउँछिन् । भलै प्रत्येक घरमा सुखको डेलिभरी मुश्किल काम हो । यत्ति छिट्टै प्रत्येक घरमा कि त पिज्जा पुग्न सक्छ वा चुनावका बेला नेताजीहरूका नारा !
तैपनि ज–जसले आशाहरूको नयाँ–पुरानो पछ्यौरा बिछ्याइरहेका छन्, ती सजिलै कसरी बिलाउँछन् र ? लक्ष्मीपूजाको दिन त्यै पुरानै पछ्यौरा पनि धूलो–सुलो फड्कारेर बिछ्याइन्छन् र घरका झ्यालढोका पनि खुलै छाडिन्छन्, ता कि लक्ष्मीमाताको प्रवेशमा सहज होस्, झ्याल ढोका बन्द देखेर लक्ष्मी फेरि छिमेकीका घरमा चाहिँ नजाऊन् भनेर ।
सत्तारूपी सुन्दरीलाई वरण गर्ने हो भने त अफररूपी जाल फ्याँक्न सिद्धहस्त हुनुपर्छ । वास्तवमा चुनावको वैतरिणी पार गर्नु छ भने भोकाका लागि भोजन र बेघरका लागि ओछ्यानको अफर फ्ँयाके पुग्छ ।
घरमा राखेको नगद गरगहना, घरजग्गाका लालपुर्जा, बहीखाता आदि निकालेर लक्ष्मीमातालाई रिझाउन अनेक प्रयत्न हुन्छ । जोसँग यी चीजहरू हुन्छन्, लक्ष्मीमाता पनि स्वतः आकर्षित हुन्छिन् । धन चुम्बक हो । धनले धनलाई नै खिच्छ । अर्थात् जहाँ धन, त्यहाँ लक्ष्मीमाता नबोलाए पनि आउँछिन् । जोसँग धन छैन, उनीहरू केवल आशाहरूको थाली सजाएर राखिरहन्छन् । शायद कुनै दिन लक्ष्मीमाता उनीहरूको झुपडीमा पनि झुल्किहाल्छिन् कि भनेर । तर लक्ष्मीमाता यस्तो जोखिम उठाउने गर्दिनन् ।
लक्ष्मीमातालाई ल्याउने काम एक कला हो, एउटा कुशलता हो । जो मानिस धोका दिने कलामा निपुण हुन्छ, लक्ष्मीमाता उसकोमा पुगिहाल्छिन् । जो मानिसहरू राज्यकोषबाट अर्बौं लिन सफल छन्, लक्ष्मीमाता उनीहरूकैमा विराजमान छिन् ।
लक्ष्मीमाता पनि चतुर भइसकेकी छिन् । इमानदारकोमा आउनुको साटो बेइमानकहाँ चैं दौडेर गइहाल्छिन् । अर्थात् जहाँ बेइमान छन्, लक्ष्मी पनि त्यहीँ हुन्छिन् । लक्ष्मीजी स्वीश आदि बैंकहरूमा पनि मस्किएर बसिरहेकी छिन् ।
तिहार र हारमा जस्तै मानिसहरूबीच पनि गहिरो खाडल छ । एकातर्फ बत्ती झिलिमिली छन् भने अर्कोतिर पूर्ण अन्धकार । एकातिर दुःखको कहर छ, अर्कोतिर धनको नहर । वास्तवमा दशैं, तिहार जस्ता पर्व नेताहरूका लागि हो, पूँजीपतिहरूका लागि हो, घुसको जुस पिउनेहरूका लागि हो । सामान्य श्रीमती र तिनका पतिहरूका लागि होइन ।
हुन पनि तिहारको उमेर केवल एक दुई दिन मात्र हो । एक दुई दिन सुखी हुनुहोस् । लक्ष्मीले पत्याएकाहरूका लागि त हरेक रात उज्यालो नै उज्यालो छ । तर लक्ष्मीले नपत्याएकाहरूका लागि भने ३६४ दिन सर्वत्र अँधेरो नै अँधेरो छ ।
कतिपयका लागि तिहार मिठाई खाने पर्व पनि हो । यो महापर्वमा मिठाईवालाहरू पनि मिसावट गर्नु र खल्ती चाँडै भर्नु आफ्नो परम दायित्व सम्झिन्छन् । अरू त अरू यो अफरै अफरले भरिने पर्व पनि हो । अखवारमा खबरभन्दा अफर बढी पढ्न पाइन्छ । अफरको ललिपप देखाएर उल्लु बनाउने खेल पनि चल्छ । महाकञ्जुस व्यापारीहरू पनि दशैं, तिहारमा कुन्नि कसरी हो खुब दानी देखिन्छन् । यो एउटा खोजको विषय पनि हो ।
भलै हाम्रो गणतन्त्रमा पनि समय समयमा अफरहरूको वर्षा हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । सत्तारूपी सुन्दरीलाई वरण गर्ने हो भने त अफररूपी जाल फ्याँक्न सिद्धहस्त हुनुपर्छ । वास्तवमा चुनावको वैतरिणी पार गर्नु छ भने भोकाका लागि भोजन र बेघरका लागि ओछ्यानको अफर फ्ँयाके पुग्छ ।
अझ रेल र पानी जहाजको अफरले त आनन्दसँग प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा पुर्‍याउँछ, फेबिकल लगाएझैं कुर्सीमा टाँसिइरहन पनि अफरै बाँड्नुपर्छ । हारेकालाई सांसद र मन्त्री, अलि अलि पढेकाका लागि निर्देशक, महानिर्देशक र डासाप झुन्ड्याएकाका लागि राजदूत ।
यो भौतिकवादी युग हो । ‘ऋण लिएरै पनि घिउ पिउनुपर्छ’ । पूरै विश्व अहिले चार्वाक्को यही दर्शनबाट प्रेरित भएर चलिरहेको छ । जनता मात्र किन, सरकार पनि पूरै ऋणमै त चलेको छ । पहिले ऋण लिनु अपमान हुन्थ्यो, हिजोआज त शान हो । ऋण दिने र लिने तयार भएपछि बजार पनि गुल्जार हुने नै भयो । त्यसैले त तिहारको एउटा हिस्सा लक्ष्मीपूजासँग पनि जोडिएर आएको ।
भलै यसमा पहिले यी लक्ष्मीमाता थिइनन्, जो आजको बजारको असीमित उपभोगकी देवी हुन् । त्यसैले सरकारका लागि यो तिहार हो भने जनताका लागि त हार हो । वास्तवमा दशैं, तिहारमा केही सीमित मानिसहरूको मात्र पूरा हक लाग्छ । बाँकीले त यसो परम्परा निभाएजसो गरेर क्षणिक खुशी भएको भ्रम पाउने मात्र हो ।
त्यसैले खुशीको भ्रम नै सही, हे ‘मेड इन चाइनाकी चन्द्रमा ! तिमी कहाँ छौ ? आऊ आएर हाम्रो भौतिकताको कालो रात हरण गर । हाम्रो अँधेरो युगको शासकहरूका आँखामा बाँधिएको कालो पट्टीभित्र छिरेर अलिकति उज्यालो छरिदेऊ । हे ‘मेड इन चाइनाकी लक्ष्मीमाता ! तिमी कहाँ छौ ? हाम्रा पूँजीपतिका उद्योगहरूले हाम्रो भगवान्को उत्पादन बन्द गरिसक्या छन् । आऊ र हामीलाई दर्शन देऊ । हाम्लाई पनि अलिकति वैभवले भरिदेऊ !
तिहार २०७७ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
राष्ट्रिय गाली प्रतियोगिता[२०७७ मंसिर, १२]